Depiote Randriamandimbisoa Félix : “Efa mahazo manao fampielezan-kevitra avokoa izao” | NewsMada
Depiote Randriamandimbisoa Félix : “Efa mahazo manao fampielezan-kevitra avokoa izao”
“Efa fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana ireny… Ny mahagaga, ny fanjakana ihany no milaza fa tsy mbola fotoana anaovana fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana izao, fa tokony hiandry.”, hoy ny depiote Tim, Randriamandimbisoa Félix.
Gaga ity depiote Tim ity fa efa manomboka sahady izany fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana izany, manoloana ny fizaran’ny filoha mivady fitaovam-pianarana ho an’ny mpianatra teny Antsonjombe ary tsy misy henatra fa ataon’ny mpitondra fitaovana izany ny raharaham-panjakana hahazoana manao fampielezan-kevitra sahady.
“Izy mivady no manolotra fitaovana ho an’ny mpianatra fa tsy ny fitondram-panjakana, efa fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana izany”, hoy izy. Ny vavan’ny filoha ihany no miteny fa mahazo manolotra izany fitaovam-pianarana izany ny tsirairay: na iray izany, na roa, na telo, na folo…
Raha ny tena marina, izy no tokony hanara-dalàna voalohany. “Mampiseho ohatra fakan-tahaka manara-dalàna. Nefa izy no efa niantso, efa afa-manao fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana avokoa ny rehetra. Tsy tokony hosakanana izany izahay, rehefa hiditra ao Mahamasina: hanao ny fetin’ny faha-15 taon’ny Tim”, hoy ihany izy.
Mandra-pahatonga ny lalàm-pifidianana vaovao, mbola azo ampiasaina ny teo aloha: tsy mbola fotoana fampielezan-kevitra izao. Tokony ho izany aloha no arahin’ny tena. Efa niteny izy fa tsy tokony hatao ilay izy. Izay no tokony harahina. Nefa izy no nanomboka azy, efa mahazo manomboka izany ny rehetra, raha ny fanazavany.